Ciidamada Ciraaq oo la wareegay degmadii kowaad ee kutaala galbeedka magaalada Mowsil - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldCiidamada Ciraaq oo la wareegay degmadii kowaad ee kutaala galbeedka magaalada Mowsil
February 23, 2017 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Ciidamada Ciraaq oo la wareegay degmadii kowaad ee kutaala galbeedka magaalada Mowsil. [Xigashada Sawirka: Anadolu]
London-(Puntland Mirror) Ciidamada dalka Ciraaq ayaa maanta oo Khamiis ah gacanta ku dhigay degmada Al-Maamoun ee kutaala koonfurta-galbeed ee magaalada Mowsil, sida ilo-wareedyo ciidamada ah ay u xaqiijiyeen wakaalada wararka Turkiga ee Anadolu.
“Ciidamada waxay si buuxda uga xoreeyeen ururka Daacish degmo kutaala dhanka galbeed ee Mowsil,” sidaa waxaa wakaalada wararka Anadolu u xaqiijiyay kornayl Abdel Salam al-Jubouri.
Ciiamada ayaa sidoo kale maanta la wareegay garoonka diyaaradaha Mowsil oo kuyaala koonfurta magaalada, sida ay xaqiijiyeen ilo-wareedyo ciidamada ah.
“Ciidamadayadu waxaa u suurtagashay in ay gacanta ku dhigaan garoonka diyaaradaha, waxaana ammaankooda sugaynaa terminaalka iyo run-wayka diyaaradaha, halka duleedka garoonka ay ka socdaan iska hor imaadyo,” Janaraal Abdelaziz al-Mosawi, oo ah taliyaha ciidamada birmadka ayaa sidaa Anadolu u sheegay.